आवधिक प्रणाली प्रत्येक रासायनिक तत्व र शिक्षित तिनीहरूलाई सरल र जटिल पदार्थ अद्वितीय छन्। तिनीहरूले अद्वितीय गुण, र धेरै सामान्य मानव जीवन र अस्तित्व गर्न undeniably महत्वपूर्ण योगदान छन्। कुनै अपवाद र रासायनिक तत्व टिन।
धातु मानिसहरूलाई परिचय प्राचीन फिर्ता जान्छ। यो रासायनिक तत्व यो दिन टिन गुण व्यापक प्रयोग गरिन्छ मानव सभ्यता को विकास मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
इतिहास मा टिन
छ जो यस धातु, पहिलो उल्लेख मानिसहरूले पहिले लाग्यो रूपमा, पनि जादुई गुण केही बाइबलीय पदहरूमा पाउन सकिन्छ। को "कांस्य" शताब्दीतिर प्ले टिन जीवनमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण। समयमा, मानिस नजिकै कि सबै भन्दा टिकाउ धातु चरेस, थियो यो एक रासायनिक तत्व टिन थप्न तामा मा प्राप्त गर्न सकिन्छ। धेरै शताब्दीयौंदेखि, यो सामाग्री उपकरण सबै कुरा र आभूषण संग समाप्त उत्पादन।
अब फलाम-टिन मिश्र धातु को गुण को खोज प्रयोग पछि, पाठ्यक्रम, यो नै मात्रा, तर चरेस, साथै अन्य धेरै मिश्र सक्रिय उद्योग, प्रविधि र चिकित्सा आज व्यक्ति संलग्न गर्न, यस्तो क्लोराइड रूपमा धातु लवण, उदाहरणको लागि, साथ लागू गरिन्छ क्लोरीन साथ टिन प्रतिक्रिया प्राप्त छ जो टिन, यो तरल 112 डिग्री सेल्सियस मा, यो हावा मा स्फटिक hydrates र धूवा खेल्छ फोडे राम्रो पानी मा घुलनशील।
आवधिक तालिका मा तत्व स्थिति
रासायनिक तत्व टिन (ल्याटिन नाम stannum - «stannum" लिखित प्रतीक Sn) Dmitriy Ivanovich Mendeleev ठीकै पाँचौ अवधिमा पचास संख्यात्मक प्रबन्ध मिलाए। को आइसोटप 120. यो धातु छैटौं समूह को मुख्य उपसमूहहरु मा पनि छ, सँगै कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम र Flerov संग - धेरै आइसोटपहेर्नुहोस्, सबै भन्दा साधारण छ। यसको स्थान amphoteric गुणहरू, उत्तिकै निहित टिन र एसिड, र आधारभूत विशेषताहरु थप विवरण तल वर्णन गरिने को भविष्यवाणी गर्छ।
आवधिक तालिका पनि समावेश परमाणु वजन 118,69 बराबर छ, टिन को।2इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 5s 5p2सामाग्री को संरचना पी-sublayer वा चार र s- र p- पूर्ण सारा बाहिरी तह खाली गर्न मात्र दुई इलेक्ट्रॉनों दिने, जटिल धातु +2 र +4 एक ऑक्सीकरण छ अनुमति।
विद्युतीय विशेषता तत्व
perinuclear ठाउँ पचास इलेक्ट्रॉनों दर्शाउन comprises टिन अणुहरु को परमाणु नम्बर अनुसार, तिनीहरूले बारी मा sublevels एक नम्बर विभाजित जो पाँच स्तर, मा प्रबन्ध छन्। पहिलो दुई मात्र s- र पी-उप-स्तर, साथै तेस्रो देखि रूपमा त्यहाँ s-, p-, d- मा एक threefold विभाजन छ छ।
बाह्य विचार , इलेक्ट्रन स्तर यो संरचना छ र इलेक्ट्रॉनों अणु रासायनिक गतिविधि निर्धारण भर्नु देखि। को unexcited राज्य तत्व दुई एक valence प्रदर्शन मा, त्यहाँ खाली सीट उप-पत्र (जो तीन unpaired इलेक्ट्रन अधिकतम समावेश हुन सक्छ) गर्न sublevel को-पी देखि एक इलेक्ट्रन को excitation मा एक संक्रमण छ। यो मामला, टिन र एक valence ऑक्सीकरण छ - 4, कुनै जोडी इलेक्ट्रॉनों देखि, र यसैले आफ्नो sublevels केही धारण मा रासायनिक अन्तरक्रिया को पाठ्यक्रम मा।
सरल पदार्थ धातु र यसको गुण
सरल पदार्थ टिन एक धातु चाँदी रंग fusible समूह बुझाउँछ छ। धातु नरम, अपेक्षाकृत सजिलै विरूपण गर्न उत्तरदायी। यस्तो धातु टिन रूपमा धेरै निहित सुविधाहरू। तल 13.2 तापमान डिग्री सेल्सियस चाँदी-सेतो खैरो कुरा देखि रंग परिवर्तन सँगसँगै छ संक्रमण धातु टिन पाउडर परिमार्जन को सीमा र घनत्व को कमी छ। टिन 231,9 डिग्री मा पिघलने र 2270 डिग्री सेल्सियस मा फोडे। सेतो स्फटिक tetragonal टिन धातु संरचना को विशेषता द्वारा प्रत्येक अन्य विरुद्ध घर्षण inflection क्रिस्टल पदार्थ ठाउँमा झुकन गर्दा pohrustyvanie र ताप बताउँछन्। खैरो टिन क्यूबिक syngony छ।
रासायनिक टिन गुण यो amphoteric देखाउन अम्लीय र आधारभूत प्रतिक्रिया दुवै, प्रवेश, दोहरी सार छ। धातु alkalis संग प्रतिक्रिया र यस्तो सल्फ्युरिक र नाइट्रिक एसिड रूपमा एसिड, हलोजन संग प्रतिक्रिया मा सक्रिय छ।
किन प्राय संविधान घटक को एक निश्चित प्रतिशत संग शुद्ध धातु मिश्र को सट्टा प्रयोग? एक व्यक्ति धातु छ नगर्ने को मिश्र धातु को निहित गुण, वा यी गुणहरू धेरै ठूलो (जस्तै, चालकता, जंग, passivation वा धातु को शारीरिक र रासायनिक विशेषताहरु को सक्रियता प्रतिरोध, यदि आवश्यक आदि) छन् भन्ने तथ्यलाई। टिन (फोटो धातु शुद्ध को एक नमूना देखाउँछ) धेरै मिश्र को भाग हो। यो एक अतिरिक्त वा आधार सामाग्री रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हाल, एक धातु मिश्र धातु को एक ठूलो रकम छ, टिन (तिनीहरूलाई लागि मूल्य व्यापक भिन्न), सबै भन्दा लोकप्रिय र प्रयोग (केही मिश्र को प्रयोग यो उपयुक्त खण्ड जानेछन्) मा हेर्न। उच्च ductility, कम: सामान्य मा, stannuma मिश्र निम्न विशेषताहरु छ पग्लिने बिन्दु, एउटा सानो कठोरता र बल।
मिश्र केही उदाहरणहरू
टिन र नेतृत्व केही dopants (एन्टिमोनी, तामा, मध्यम, जस्ता, चाँदी, ईण्डीयुम) संग को मिश्र धातु - तथाकथित टिन मिलाप, सबै भन्दा राम्रो सम्बन्ध गाँसिसकेको गुण लागि therein stannuma को प्रतिशत 49-51 वा 59-61 प्रतिशत हुनुपर्छ। बण्ड बल टिन को ठोस समाधान धातु सतहहरु fastened को गठन सुनिश्चित गर्दछ।
Garth - टिन, नेतृत्व र एन्टिमोनी एक मिश्र धातु - (यी धातु को अनावश्यक एकाग्रता को ingress रोक्न, अखबार मा खाद्य पदार्थ र्याप गर्न सिफारिस गरिएको छ किन छैन जो छ) टाइपोग्राफिकल मसी को आधार छ।
Babbit - टिन मिश्र धातु, नेतृत्व, तामा र एन्टिमोनी - कम द्वारा विशेषता छ घर्षण, उच्च वेयर प्रतिरोध।
ईण्डीयुम-टिन को एक मिश्र धातु - fusible सामाग्री, जो निहित refractoriness, जंग प्रतिरोध र एक ठूलो बल हो।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक यौगिकों
टिन प्राकृतिक यौगिकों एक श्रृंखला खेल्छ - अयस्क। cassiterite र Yokes - - घन2FeSnS4धातु 24 प्रकारका एक खनिज मिश्रित, सबै भन्दा उद्योग लागि महत्त्वपूर्ण टिन ओक्साइड छ। टिन पृथ्वीको पाप्रो मा dispersed, र तिनीहरूलाई द्वारा गठन भएको यौगिकों, एक चुम्बकीय मूल छ। उद्योग पनि एसिड नुन र टिन Silicates poliolovyannyh प्रयोग भएको छ।
टिन र मानव शरीर
रासायनिक तत्व टिन मानव शरीर मा यसको मात्रात्मक सामग्री एक ट्रेस तत्व हो। यसको मुख्य क्लस्टर जहाँ सामान्य धातु सामग्री सुविधा समसामयिक विकास र musculoskeletal सिस्टम यसको समग्र कामकाज हड्डी ऊतक, छ। को हड्डी साथै टिन को जठरांत्रिय पर्चा, फोक्सोमा, अन्तस्करणले र हृदयमा केंद्रित।
पनि प्रतिकूल जीन उत्परिवर्तन मा - यो धातु को अत्यधिक संग्रह शरीर को एक सामान्य विषाक्तता, र थप दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउन सक्छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ। हालै, यो समस्या वातावरण को पारिस्थितिकी राज्य चाहेको गर्न धेरै पत्ते, एकदम सान्दर्भिक छ। नजिकैको औद्योगिक एस्टेट वरिपरि शहर र क्षेत्रहरु को टिन बासिन्दा संग नशा को उच्च सम्भावना। सबैभन्दा विषाक्तता मा यस्तो stannous क्लोराइड, र अरूलाई रूपमा फोक्सोमा टिन लवण, मा संग्रह गरेर हुन्छ। एकै समयमा, ट्रेस तत्व कमी हानि र बाल हानि सुनेपछि, विकास मा एक मंदी ट्रिगर हुन सक्छ।
धातु व्यावसायिक धेरै इस्पात बिरुवाहरु र कम्पनीहरु मा उपलब्ध छ। यो सिल्लियां, छड, तार सिलेंडर, यस्तो टिन रूपमा शुद्ध सरल पदार्थ को anodes को रूप मा उत्पादन गरिएको छ। मूल्य प्रति किलो 900 3000 मा rubles देखि दायरा।
यसको शुद्ध रूप मा टिन शायद प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतः प्रयोग मिश्र र यौगिकों - नुन। टिन मिलाप तामा मिश्र धातु, इस्पात, तामा बनेको सम्बन्ध गाँसिसकेको भागहरु उच्च तापमान र गंभीर यांत्रिक भार उजागर जो छैन, को मामला मा प्रयोग गरिन्छ, तर एल्यूमीनियम वा यसको मिश्र बाट निर्मित लागि सिफारिस गरिएको छैन। टिन मिश्र को गुण र विशेषताहरु प्रासंगिक खण्डमा वर्णन छन्।
मिलाप पनि यो अवस्था यस्तो टिन रूपमा आदर्श धातु मिश्र आधारित मा, मिलाप चिप्स लागि प्रयोग। फोटो टिन-नेतृत्व मिश्र धातु लागू एक प्रक्रिया देखाउँछ। यसलाई प्रयोग गरेर तपाईं एकदम पातलो काम गर्न सक्छन्।
खाद्य उत्पादनहरु लागि डिब्बे - कारण टिन को जंग आफ्नो उच्च प्रतिरोध गर्न यो tinned फलाम (Tinplate) को निर्माण को लागि प्रयोग गरिन्छ। चिकित्सा, दन्त चिकित्सा मा विशेष मा, टिन दन्त fillings प्रदर्शन को लागि संलग्न। चकलेट पाइपलाइन टिन-ढाकिएको र यसको मिश्र बेयरिंग निर्मित छन्। यो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्न र बिजुली ईन्जिनियरिङ् मा अमूल्य योगदान।
यस्तो stannous लवण, fluoroborates, Sulphates र chlorides को जलीय समाधान इलेक्ट्रोलाइट रूपमा प्रयोग गरिन्छ। टिन ओक्साइड - सेरामिक्स लागि ग्लेज। प्लास्टिक मा परिचय र टिन विभिन्न डेरिवेटिव को कृत्रिम सामाग्री गरेर आफ्नो flammability र हानिकारक वाफ अलग कम गर्न सम्भव छ।
तपाईं क्यानाडा के महादेशमा छ मा थाहा छ?
योजना को निरीक्षक सामान्य "" को कमेडी मा निरीक्षक को छवि ", काम गर्दछ"
प्रकृति मा सन्तुलन
इस्राएलमा स्तन क्यान्सर को निदान
Nikolai Novikov - एक लेखक, पत्रकार र शिक्षक। जीवन पथ Nikolaya Novikova मा प्रमुख कोसेढुङ्गामा
सोडियम etamzilat: analogs र समीक्षा